माधव नेपाल प्रति एमाले अध्यक्ष ओली किन भए नरम ? | Safal Khabar
माधव नेपाल प्रति एमाले अध्यक्ष ओली किन भए नरम ?
शुक्रबार, ०८ साउन २०७८, ०७ : ५६
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकाएक यु–टर्न भएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहप्रति लचिलो देखिएका छन्। तर यो यु–टर्न पनि ओलीको ‘जालझेल’ हुने सक्ने आशंकाले नेपाल समूह विश्वस्त देखिएको छैन। ओलीबाट ठोस प्रस्ताव नआउँदासम्म विश्वास गर्न नसकिने नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतले असार २८ मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएपछि उनले असार ३० मा नेपाललाई गद्दार घोषणा गर्दै पार्टीभित्र कुनै स्थान नभएको बताएका थिए। तर सोमबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अधिकांश नेताले पार्टी एकता रहेमात्रै उपलब्धि जोगाउन र हासिल गर्न सकिने नत्र पार्टी नै गम्भीर संकटमा पर्ने भएकाले सबैलाई समेट्दै एकताको पक्षमा उभिन ओलीलाई दबाब दिएका थिए।
सोमबारको बैठकबाट नेपाल पक्षका २३ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका ओली बिहीबार सबैलाई आममाफी दिने घोषणा गर्न बाध्य भए। ‘हामी को, कहाँ छौं, त्यो कुरा छाडिदिऊँ ,देश र जनताको कुरा गरौं, अब विवाद छाडौं, पार्टी एकताको कुरा गरौं, आउनुस् मिलेर काम गरौं,’ ओलीले बिहीबार राजधानीमा अयोजित एक कार्यक्रममा भने। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।